Fifi manambara ny Hatsaran-tarehy tamin'i Léa Fandresena
TAFATAFA MOMBA NY HATSARAN-TAREHY
Am-pifaliana no iarahabana ny mpanaraka ny Pôetawebs ato amin'ity efitry ny tapatapakahitra ity. Ny efitra rehetra ato moa dia azo andraisana am-pitiavana ireo vaovao momba ny pôeta sy ny tononkalo rehetra avy amintsika.
Manana vahiny miavaka isika anio satria tovolahy mitsikitsiky sy falifaly mampiseho ny hatsarantarehiny no manoloana eto. I Léa Fandresena no mitafatafa aminy.
Faly mandray anao izahay ary miarahaba tongasoa e! Efa liana te hahafantatra ny vahiny ny mpisera!
Miarahaba antsika rehetra mpitsidika sy mpanaraka ny tranonkalan'ny Pôetawebs. Fifi Razakarison dia pôeta misehatra kokoa amin'ny tononkalo sy ny hira malagasy. Marihina fa efa nivahiny teto ihany ary indro fa tonga indray.
Anatina fikambanana ivondronan'ny olona maro ianao. Mety hahaliana ny mpisera ny momba azy sy ny tanjony.
"Ny tanjonay dia ny hampandroso an'i Madagasikara amin'ny zavakanto malagasy"
Eny, manana fikambanana tokoa izahay. MPIZAKA STeLaRiM na MPIangaly ZAvaKAnto Sampana Teny sy Lahabolana sy Riba Malagasy. Niforona tamin'ny 1985 tany ho any teny amin'ny anjerimanontolo Ambohitsaina. Misehatra ny tononkalo, tantara tsangana, hira malagasy... Ny tanjonay dia ny hampandroso an'i Madagasikara amin'ny zavakanto malagasy. Eo ihany ny fampivoarana sy fitaizana ny aingam-panahin'ireo mpikanto.
Hanatanteraka hetsika mitondra ny lohateny hoe "hatsarantarehy" ianareo. Hampiseho ny hatsarana tokoa na tovolahy na tovovavy
Azonao ampahafantarina anay ve ny andinindininy?
Misy an'io hetsika io tokoa ato ho ato izay karakarain'ny MPIZAKA STeLaRiM mitondra ny lohateny hoe "Ny hatsarantarehy". Tsangan-tononkalo izy io na hadika amin'ny teny farantsay hoe: "théâtre poétique", tantara tsangana mifamaly resaka amin'ny tononkalo. Tantaram-pitiavana izy io izay nalaina tamin'ny tantaran'ny andriamanitry ny pôezia na ilay angano grika. Rindran-tsehatra efa vita hatry ny ela izy io (2013) ary i Diadema sy ireo zokinay teo aloha tao amin'ny MPIZAKA izay mpianatra mpandalina momba ny haisoratra no namolavola azy tamin'izany. Hoseharinay ao amin'ny Cemdelac izy io amin'ny 17 jolay izao.
Ankoatra izay, hiavaka ny hetsika amin'ny alalan'ireo haingon-tsehatra, ny jiro sy ny zavamameno. Ary io tsangan-tononkalo io dia tsy tononkalon'ireo mpanoratra toa an-dry Randza, Rado, Myosotis fa asa soratr'ireo zokinay teo aloha no nananganana ny hatsarantarehy.
Efa namoaka boky ve ny fikambanana ary hisy havoaka manokana ho amin'io andro io?
Efa namoaka boky izahay ny taona 2015, "Vatolahin-tsoratra", ny 2016, "Sokoela". Fa amin'ity kosa dia tsy misy boky fa ny fanotronanareo no tena ilainay ho voninahitry ny haisoratra malagasy. Ankoatra izay, misy koa ny vahiny tsy ampoizina amin'io fotoana io.
Ahoana no mety ho endriky ny fotoana?
"... ary hahazo fahalalana sy aim-panahy ianao"
Mizara telo ny hetsika amin'io ary voazaran'ny hira malagasy. Amin'ny 17 jolay izao izany ao amin'ny Cemdlac Analakely. Fanentanana farany, tongava fa tsy hahafaty antoka anao ny fanotronana ary hahazo fahalalana sy aim-panahy ianao. Tongava maro fa tsy misy sandany io ary tsy indroa eto an-tany.
Misaotra anao nivahiny teto amin'ity efitra ity. Manentana ny mpisera rehetra ho avy hanafana ny lanonana. Mirary anareo hahavita soa ny hetsika!
Misaotra ihany koa Léa nanaiky nampandroso anay teto amin'ny Pôetawebs. Mametraka ny mandra-pihaona. Amin'ny 17 izany mihaona!